Codsiga Mica-ga ee resin iyo warshadaha balaastigga ah | Lingshou
Codsiga Mica ee kujira Resin iyo Warshadaha balaastigga ah
(1) Beddelka sifooyinka indhaha ee balaastikada
Chips Mica waxay ka tarjumi kartaa oo iftiimin kartaa shucaaca infakshannada sidoo kale waxay nuugi kartaa oo gaashaanka u adkeyn kartaa UV, iwm. Sidaa darteed, haddii lagu daro dhul-qoyan oo tayo sare leh mica filimada beeraha, way adkaan doontaa in iftiinka uu baxo ka dib marka uu gudaha galo, sidaas darteed haynta kuleylka ilaa aqalka dhirta lagu koriyo. iyo filim caag ah, iwm. Codsigan, nadaafadda iyo qaab dhismeedka qulqulka budada mica ayaa aad muhiim u ah. Dhinac, nijaasta waxay yareyn doontaa mica oo ah saameynteeda kobcinta, saameyn ku yeelan doonta daahfurnaanteeda, waxay kordhin doontaa heerka ceeryaanta sidoo kale waxay yareyn doontaa soo gelitaanka iftiinka ee aqalka dhirta lagu koriyo. Dhanka kale, hadii mica aysan ku fiicneyn qaab dhismeed qulqulaya, markaa saameynteeda xannibaadda shucaaca infakshanka ayaa sidoo kale ah mid liita. Gansu Gelan Technology Technology Co., Ltd., oo ka tirsan kooxda Hong Kong Lee Group ayaa waligeed u isticmaashay dhul qoyan mica si ay ugu sameyso filimka beeraha, kaliya si loo yareeyo daah furnaanteeda 2%.
Dawooyinka, waxyaalaha la isku qurxiyo, cuntada iyo waxyaabaha kalewaxay ubaahantahay inay difaacdo shucaaca, gaar ahaan shucaaca shucaaca, si loo wanaajiyo waxqabadka keydkooda. Si tan loo sameeyo, waxaan ku dari karnaa budada mica dhulka budada ah qaab wanaagsan oo qaabaysan oo xirxiran caagadooda. Fayras weyn oo mica ah oo aad u balaaran ayaa hagaajin kara ujirka alaabta (saamaynta qalinleyda), iyo budada mica ee ganaaxdu way baabi'in kartaa sanka.
(2) Hagaajinta Hawada-Cimilada Wejiga
Budada mica budada ah ee qoyan waxay leedahay qaab qafiif ah oo qafiif ah, oo dhumucdiisuna ay tahay nanometer-ka iyo qiyaasta dhexroor-dhumucdiisuna waa ilaa 80 ~ 120 jeer, sidaa darteed leh aag aad u ballaaran oo wax ku ool ah. Hawada adag ee balaastigga ayaa si aad ah loo kordhin doonaa ka dib marka lagu daro budada mica-ga ah oo tayo sare leh iyo nadiif saafi ah. Balaastikada noocan oo kale ah, sida ku xusan qoraalka suugaanta, ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo Dhalooyinka Coke, dhalada biirka, dhalooyinka daawada, waxyaabaha baakadaha ka samaysan oo qoyaan leh iyo sidoo kale noocyo badan oo gaar ah oo la mid ah agabyada baakadaha caagga ah.
(3) Hagaajinta Astaamaha Jirka iyo farsamada ee balaastigga
Qalabka buufiska leh ee diirran iyo kuwa buufiska leh ayaa awood u leh inay xakameeyaan walaaca walxaha, taas oo lamid ah isbaheysiga xoojinta ee sibidhka sibidhka iyo walxaha guban ee alaabada badan ee xoojinta (balaastigga, caagga, resin, iwm). Codsigiisa badanaa wuxuu kujiraa fiber kaarboon, laakiin fiber kaarboonku aad ayuu qaali u yahay uguna xaddidan yahay, sidaa darteed, way adag tahay in lagu dabaqo.
Asbestos si adag ayey u xaddidan tahay codsigeeda sababa kansarka. Fiber dhalada qaali ah (tusaale ahaan, dhexroor 1 micron ama heer nanometer ah) waxay wajaheysaa dhibaatooyin badan soosaarista sicirkiisuna sidoo kale waa sarreeyaa. Bixiyeyaasha Granular, oo ay ku jiraan budada micron quartz iyo budada kaolin ee ku badan dhulka qalalan ee mica ma haysto shaqadan sida ciid iyo dhagxaanta sibidhka sibidhka.Kaliya markaad kudareyso buuxinta sida budada mica dhulkataasi waa heer sare oo cabirkiisu yahay dhexroor-dhumuc weyn, xoogga gantaalaha, awooda saameynta, modulus laastikada ah, guryaha kale ee farsamada, Qaabeynta xasilloonida (sida diirinta kuleylka iyo kala-duwanaanta daalka ka soo horjeedka torsion), iyo waxqabadka lidka-labiska si weyn ayaa loo wanaajin doonaa.Inbadan oo daraasad ah oo arrintan ku saabsan waxaa lagu sameeyey Sayniska Qalabka. Hal fure ayaa ah cabirrada miirayaasha.
Balaastikada (tusaale ahaan, resin) waxay ku koobantahay marka loo eego adkaanta laftooda. Noocyo badan oo buuxiyeyaasha (tusaale ahaan, budada talc) aad ayey ugu yar yihiin awoodooda farsamo. Taas bedelkeeda, ahaanshaha mid ka mid ah qaybaha 'granite', mica waxay ku fiican tahay adkaanta iyo xoog farsamaynta. Sidaa darteed, adoo ku daraya budada mica sida buuxinta balaastigga, saamaynta xoojinta waxay noqon doontaa mid aad u weyn. Saamiga sare ee dhexroor-dhumucdiisuna waa furaha saamaynta xoojinta budada mica-sareeya.
Daaweynta isku-darka budada mica waxay door weyn ku leedahay arjiga kor ku xusan waxay si aad ah u wanaajin kartaa daacadnimada kiimikada ee walxaha, sidaas darteed waxay si weyn u xoojineysaa waxqabadka walxaha. Daaweynta iskuxiran ee saxda ah ayaa sidoo kale fure u ah xoojinta hantida budada mica, sidaas oo kale ayaa wax looga beddelayaa hannaanka qaylo-dhaanta ee resin. Isticmaalka budada mica ee tayada sare leh waxay ka dhigi kartaa badeecada mid sii macangagsan. Tikniyoolajiyadda noocan ah ayaa si balaadhan looga isticmaalaa warshadaha balaastigga ah, sida waxsoosaarka alaabada xoogga badan, oo ay ku jiraan qaybo balaastik ah oo mashiinada iyo gawaarida, alaabada dhulka lagu sameeyo, maqaarka bannaanka ee qalabka guryaha, qalabka xirxiran, maalin kasta isticmaalka, iwm.
(4) Hagaajinta Hantida Alaabta ee Waxsoosaarka Balaastikada ah
Mica waxay leedahay heerar aad u sarreeya oo iska caabin ah ee korantada ah, sidaa darteed waa qalab tayo sare leh oo birifaad laftiisa ah Adeegsiga mica si loo wanaajiyo hantida soo-go'ay ee agabku waa teknolojiyad caan ah. Soosaarida badeecado balaastik ka sameysan oo firfircoon, mica dhul jilicsan oo qoyan mica ayaa lagu dari karaa. Sida kor ku xusan, mica ku badan maadada birta waa in laga ilaaliyaa shaqadooda gaashaansashada hooseysa. Dhul qalalan mica mayda mayda oo waxay ku badan tahay maadada birta, sidaa darteed kuma haboona in la isticmaalo.
Codsiga dhul gariirka mica ee balaastigga ayaa aad uga badan intaas. Isticmaalidda buuxda ee sifooyinka gaarka ah ee budada dhul gariirka mica, waxyaabo badan oo caag ah oo qaali ah iyo tikniyoolajiyadda dalabka ayaa lagu horumarin karaa. Tusaale ahaan, ku darista budada mica-balaastigga, waxqabadka daabacaada iyo guryaha isku-xidhka ah ayaa la wanaajin karaa; adoo hoos u dhigaya SnO2 dusha ama lagu dhejiyay bir, budada mica waxay noqon doontaa mid wax tar leh oo loo isticmaali karo in lagu sameeyo alaabada ka soo horjeedda istaatistikada iyo balaastikada; iyadoo lagu xardhay TiO2, mica waxay noqon doontaa midab buluug iyo waxaa loo adeegsan karaa dalabyo badan; midab ahaan, mica waxay noqon doontaa midab fiican; mica waxay sidoo kale hagaajin kartaa waxqabadka saliidaha ee alaabta.
Waqtiga boostada: Jun-23-2020